काकससका सर्वश्रेष्ठ रेस्टुरेन्ट | सडकको लागि एक युगल
सेप्टेम्बर 13, 2018 /6टिप्पणिहरु
अजरबैजान, आर्मेनिया र जर्जिया दक्षिण काकेशस क्षेत्रको तीन सत्कारशील देशहरू हुन्। तिनीहरूका रोचक पुरातन परम्पराहरूका लागि चिनिन्छन्, पहाडी प्रकृति र बेशक, अद्भुत स्वादपूर्ण व्यंजन।
हामी कसरी राष्ट्रिय काकेशियान व्यञ्जनको वर्णन गर्न सक्छौं? यो सुगन्धित छ, मसाले र जडी बूटियों को एक महान उपयोग संग मासु र अनाज आधारित व्यंजनहरु र रोटी को एक गहिरो प्रेम को भित्र स्कीरी र मीठा को साथ। र यी सबै देशहरूमा समान समान व्यञ्जनहरू र केही बिल्कुल अनोखाहरू छन्। त्यसोभए, कहाँ यो कोकेशियन राष्ट्रिय व्यञ्जेलको सबै गोप्य संग प्राप्त गर्न राम्रो छ? आज हामी यी प्रश्नको जवाफ दिन प्रयास गर्नेछौं!
अर्मेनियामा शीर्ष5उत्तम रेस्टुरेन्ट
एक हजार वर्षको इतिहासको साथ अर्मेनियाई समृद्ध संस्कृति परम्परागत व्यञ्जनको स्वाद संग स्वाद गरिन्छ। तिनीहरू शताब्दीका लागि एकत्रित भएका छन् र अनैतिक सम्पदाको रूपमा पीढीबाट जन्मेका छन्। येरेवानमा सबैभन्दा लोकप्रिय पारंपरिक रेस्टुरेन्ट निम्न हुन्:
"ताभर येरेवान" को रेस्टुरेन्ट रेस्टुरेन्ट र राष्ट्रिय र काजेसियन व्यञ्जनको लागि उत्तम हो। मेनू मा मासु प्रेमी र शाकाहारी दुवै को लागि एक व्यंजन को एक विस्तृत छनौट प्रदान गर्दछ।
रेस्टुरेन्ट को आंतरिक एक प्रामाणिक शैली मा बनाइयो, पारंपरिक अर्मेनियाई कालीन र व्यंजन संग। सबै रेस्टुरेन्टहरु शहर को केन्द्र मा स्थित छ।
ठेगाना: Pushkin st। 10
डोल्मा एक राष्ट्रिय रेस्टुरेन्ट हो जसले धेरै बिर्सिएका पारंपरिक व्यञ्जनहरू पुनर्जीवित गरेको छ। रेस्टुरेन्टको हस्ताक्षर भित्री पारंपरिक अर्मेनियाई डोल्मा हो। डोल्पा अङ्ग्रेका पातहरूबाट तयार पारिएको छ जुन मासुको मासु संग भरिएको छ। डोल्मामा डिशको पारंपरिक डोल्मा र आधुनिक व्याख्या दुवै सेवा गर्दछ।
भोजनालय को आंतरिक पारंपरिक जातीय शैली मा बनाइएको छ जसको ठूलो खिडकियां, दराज को प्राचीन चाइनाहरु र दर्पणहरु संग हुन्छ।
ठेगाना: Tumanyan st। 30 / 3
Tospia शहर को केन्द्र मा स्थित छ, मुख्य सड़कों मध्ये एक। रेस्टुरेन्ट को मेनू मुख्य रूप देखि राष्ट्रीय व्यंजन हो, तपाईं यूरोपीय खाना को धेरै व्यंजनहरु लाई पनि पा सकते हो।
पुरातन देश को इतिहास र परंपराहरु को बारे मा टोस्पिया को इंटीरियर छ। रेस्टुरेन्ट पारंपरिक शैली मा बनाइएको छ, आंतरिक पुरातन प्रदर्शनों को प्रतियां संग पूरा भयो। फर्शहरू "भान्डा", "कला", "गार्डन" मा विभाजित हुन्छन् जुन विभिन्न शैलीहरूमा सजाय गरिन्छ।
ठेगाना: अमीयन स्टे। 7
हालैको गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक क्षेत्रमा येरेवनको नयाँ रेस्टुरेन्ट रेस्टुरेन्ट हाल खोलिएको छ। रेस्टुरेन्ट को आंतरिक परंपराहरु र आधुनिकता को एक अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत गर्दछ। हलहरु को पर्खालहरु संग विशाल जागहरु संग सजाइएको छ, काठ को सजावट, फर्नीचर एक minimalist शैली मा बनाइन्छ। तातो रङ्गहरू हावामा राख्छन् जसले सकारात्मक भित्रीहरूमा राख्दछ।
परम्परागत बर्तनको एक विस्तृत चयन एक धनी शराब सूची संग पूर्ण हुन्छ। हरेक शुक्रबार, रेस्टुरेन्टले शराब चोक लगाउने र व्यवहार गर्दछ।
ठेगाना: Ghazar Parpetsi st। 9
हामी नोयान रेस्त्राँको साथमा अर्मेनियाली रेस्टुरेन्टहरूको सूची पूरा गर्नेछौं, शहरमा पहिलो राष्ट्रिय रेस्टुरेन्टहरू मध्ये एक, जुन अझै पनि शहरमा सबै भन्दा राम्रो दर्जामा समावेश छ। इन्टरनेट पारंपरिक अर्मेनियाई शैलीमा बनाइएको छ र रातो र पारंपरिक घरको चीजहरु रातो र काठका रंगहरु संग।
रेस्टुरेन्ट मा पारंपरिक मासु र माछा व्यंजन, सलाद र पारंपरिक फल वोदका एक विस्तृत छनौट प्रदान गर्दछ।
जर्जियाका शीर्ष5सबैभन्दा लोकप्रिय रेस्टुरेन्ट
यो जर्जियाली भोजन को सम्पूर्ण स्वाद, व्यक्त गर्न गाह्रो छ। मानिसहरूको तातो स्वादको तातो र उज्यालो जर्जियाली व्यंजनहरूमा परिणत गरिन्छ। तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र अन्तमा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि जर्जियाली व्यंजनहरूले निम्न जर्जियन रेस्टुरेन्टहरूमा कसरी स्वाद दिन्छन्:
ठेगाना: Agmashenebeli ave। 132
जर्जियामा सर्वश्रेष्ठ रेस्टुरेन्टहरूको सूची, राजकुमारी बारबरा जर्डर्डजाज को विरासत Barbarestan संग सुरु हुन्छ। थप ठीक छ, उनको विरासत एक नुस्खा पुस्तक हो जुन रेस्टुरेन्टको उत्कृष्ट मेनुको लागि प्रेरणा बनिरहेको छ। बाराबारस्किस्तानका मालिकहरूले कुकबुकबाट सबै भन्दा राम्रो काम गरे र त्यसलाई अनुकूल गरे ताकि तपाईं आफ्नो स्वादको लागि आदर्श पाक पाउनुहुनेछ।
दुई-कथा भवन एकाग्रता र गर्म जर्जियाको स्वभाव जोड्दछ। रेस्टुरेन्टमा एक शराब तहखाने छ एक विशाल संग्रह संग जर्जिया वाइन.
ट्याग्लाला टिबिलिसीको केहि रेस्टुरेन्ट श्रृंखलाहरू मध्ये एक हो, जसले राजधानीमा सम्मान हासिल गर्न सकेको थियो। भोजनालय को आंतरिक र बाहिरी एक पारंपरिक जर्जियाई शैली मा बनाइन्छ। यहाँ तपाईं जर्जियाको सबै स्वाद र आत्मा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
ब्रान्डको अर्को फाईल यसको आफ्नै पङ्क्ति हो। अक्षरों को एक सानो चयन ताजा स्थानीय बियर को एक ठूलो चयन द्वारा क्षतिपूर्ति गरिन्छ।
ठेगाना: st। Akaki Beliashvili 75, त्बिलिसी
Tsiskvili भोजनालय वा मिल उच्च मूल्याङ्कन संग अर्को लोकप्रिय पर्यटन स्थल हो। रेस्टुरेन्ट को निर्माण एकदम उल्लेखनीय छ। यसको सामने त्यहाँ फलफूल रूखहरू र ट्राउटको साथ एउटा पूल हो। ढुङ्गाको पथसँगै हिड्दै, तपाईं रेस्टुरेन्टमा पुग्नुहुनेछ।
शानदार व्यंजन र रंगीन इंटीरियर को अतिरिक्त, रेस्टोरेंट मा दैनिक संगीत र नृत्य संग एक शो कार्यक्रम हो।
Metekhi को छाया मा
ठेगाना: Tsamebuli पासज, 29-a
"मेटकिहीको छायामा" टिबिसिसीको ऐतिहासिक जिल्लामा अवस्थित छ। नदी नदी को शानदार दृश्य, ओल्ड टाउन र सल्फर स्नान रेस्टुरेन्ट को बालकनी देखि खुलती छ।
रेस्टुरेन्टको स्थान मात्र फाईदा होइन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू उत्कृष्ट व्यञ्जन हो। यो उज्ज्वल र स्वादिष्ट जर्जिया व्यंजन, जर्जियाका मदिराहरूको ठूलो चयन, राष्ट्रिय संगीत र एक न्यानो वातावरणले तपाईंको दिन अविस्मरणीय बनाउँछ।
Khehelebi Tbilisi मा सबै भन्दा अधिक वायुमंडलीय मध्ये एक मानिन्छ, र बेशक एक रेस्टोरेंट मा स्वादिष्ट व्यंजन। यस तथ्यको बावजूद कि रेस्टुरेन्ट रेस्टुरेन्ट शहर मा स्थित छैन, यो पर्यटक र स्थानीय दुवै को बीच लोकप्रिय छ। काखलेबीसँग धेरै विशेषताहरू छन्। मुख्य विशेषता दीवार पछि पूर्णतया फरक वातावरण संग एक धेरै सरल इमारत हो। अर्को सुविधा भट्टरको व्यावसायिक सेवा हो। उनीहरूले केही प्रश्नहरू सोध्न सक्छन् र तपाईंको स्वादको लागि उत्तम डिश प्रदान गर्न सक्छन्। वैसे, सब्जिहरु र सागहरु रेस्टुरेन्ट को आफ्नो खेत मा उगाई जान्छन्।
अजरबैजानका शीर्ष5उत्तम रेस्टुरेन्ट
देशको मुख्य जीवन राजधानी बेकूमा केन्द्रित छ, र सबैभन्दा लोकप्रिय राष्ट्रिय रेस्टुरेन्ट पनि राजधानीमा अवस्थित छन्। अजरबैजान भोजन धेरै विशिष्ट छ, धेरै व्यञ्जन छिमेकी देशबाट उधारिएको छ र रोचक पूर्वी नामहरु द्वारा प्रतिनिधित्व गरिन्छ। स्थानीय व्यंजनहरू स्वाद गर्न बाकूमा सबैभन्दा राम्रो रेटेड रेष्टुरेन्ट रेस्टुरेन्ट मध्ये एकमा जानुहोस्।
ठेगाना: सालटिन एसेगरो st। 86
शीर्ष रेस्टुरेन्ट को सूची मा पहिलो संग्रहालय रेस्टुरेन्ट रेस्टुरेन्ट शििरवनस्वा, जुन पारंपरिक कालीन र तांबे को बर्तन संग पुराना बाकू को शैली मा बनाइन्छ। रेस्टुरेन्ट को निर्माण राजधानी को सबै भन्दा पुराना सडक मा स्थित छ। आन्तरिक रोजगारीको जीवन र चित्रहरूको वस्तुहरु द्वारा पूरै छ।
मेनु अलग-अलग क्षेत्रहरु बाट राष्ट्रीय व्यंजनहरु मा शामिल हुन्छन्। हरेक साँझ, रेस्टुरेन्टमा प्रत्यक्ष संगीत छ र तपाईं मुगाम स्वामीहरूको संगीतको आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ।
ठेगाना: Khodjali ave 20
सुमख बाकूको राष्ट्रिय रेस्टुरेन्टहरू सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ, जसले हालैमा मेनु अद्यावधिक गर्यो र अब पारंपरिक अज़रबैजानको व्यंजनको ठूलो चयन प्रस्तुत गर्दछ। धेरै व्यंजनहरू टन्डरमा तयार छन्। प्रत्येक परम्परागत पर्व एक चाय-पार्टी, मीठो जाम र मिठाईको साथ समाप्त हुन्छ। सुमखमा तपाईं अनानास र Feijoa बाट जाम को विदेशी किस्महरू स्वाद गर्न सक्नुहुन्छ।
ठेगाना: संसदको एवेन्यू 8A
नखचवान ​​वा नख्चेवानवान ऐतिहासिक आर्मेनियाको अंश थियो, सोवियत प्राधिकरणहरूले आर्मेनियाको ऐतिहासिक भूमिलाई अजरबैजानको धेरै जवान जवान बनाउनको लागि निर्णय गरे। नाजाज्वान अझै पनि परम्पराहरु को केहि बनाए राखयो जो आर्मेनिया मा उत्पन्न भयो।
रेस्टुरेन्ट नखचवानले नख्चेवान भोजनालयको उत्कृष्ट व्यञ्जन र पारंपरिक लोहार प्रदान गर्दछ।
AVAZ भोजन र लाउंज
ठेगाना: मास्को एव।
AVAZ भोजन र लाउंज बाकू मा एक नयाँ रेस्टुरेन्ट छ, एक आधुनिक शैली मा बनाइयो। एकै समयमा, रेस्टुरेन्ट को व्यञ्जन विशेष रूप देखि पारंपरिक छ। यस्तो चरम र भान्साको भान्साको मिश्रणले ध्यानको योग्य छ।
ठेगाना: बेबे एवेन्यू 11 / 31
यो बाबेक प्लाजा व्यवसायिक केन्द्रमा बुकुमा अर्को नयाँ रेस्टुरेन्ट हो। भोजनालय को आंतरिक बस लक्जरी र महंगी छ, जस्तै सबै शहर मा। एकै ठाउँमा तपाईं वरिपरि सम्पूर्ण शहर र सबै चीजहरू विशेष रूपमा लक्जरी र चमकदार ध्यान केन्द्रित गर्न सुरु गर्न सुरु गर्न थाले।
यसको शानदार पर्खाल को पछि, नोश रेस्टुरेन्ट सबै रंगहरुमा प्रामाणिक परंपरागत व्यञ्जन प्रदान गर्दछ।
आवरण फोटो एट्रिब्युशन: सेर्टकट [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], Wikimedia Commons बाट
श्रेणी: आर्मेनिया, अजरबैजान, युरोप, खाद्य र पेय, जर्जिया (युरोप), परम्परा टैग: आर्मेनिया, अजरबैजान, युरोप, खाना, जर्जिया, रेस्टुरेन्ट
← प्रामाणिक परिष्कृत फल कसरी बनाउने
अष्ट्रेलियामा सबैभन्दा एडभेन्टिभ ह्याक्सको6→
6 टिप्पणिहरु "आर्मेनिया, जर्जिया र अजरबैजानको सर्वश्रेष्ठ नेशनल रेस्टुरेन्टहरू"
काकेशियान व्यञ्जन सधैं यसको मासुको व्यंजनको लागि प्रसिद्ध छ, जस्तै हंकल, शर्पा, भेडाको भेडा, शीश किब्याब। जर्जिया र आर्र्मेरिया काकेशियन व्यञ्जनको उज्ज्वल उदाहरण हुन्। त्बिलिसीमा यो रेस्टुरेन्ट द्वारा पारित गर्न असम्भव छ, हावामा रहेका सुगन्धहरू तपाईंको स्वामित्व लिन्छ। स्वच्छ हावा, पहाडहरू; काभकाज पृथ्वीमा प्रमोदवन हुनुहुन्छ।
कोकेशियान व्यञ्जन सधैं रसदार कबाब, सुगंधित मसाले, ताजा पकाएको रोटी लोहार, विभिन्न फलहरु, राम्रो दाखरस र निस्सन्देह, मेजबान को आतिथ्य संग सुगन्ध संग सम्बन्धित छ।
सेप्टेम्बर 21, 2018
त्यो प्राय: प्रायः तपाईं हो भने मामला छ! सही मान्छेले राम्रो खाना बनाउन ठूलो खाना बनाउन सक्छ - यो संस्कृति र मान्छेको बारेमा धेरै हो।
सेप्टेम्बर 22, 2018
जर्जियामा, म सबै भन्दा धेरै मक्सी पिउन चाहन्छु र खान खानलाई खान्छु। यो वायुमण्डलीमा मात्र मेमोरेजिङ छ। मेरो लागि, जर्जियाले ताजा आटा र मीठो शराबको मुस्कुराउँछ।
र परिदृश्य बस कृपया मलाई।
यी सबै देशहरु मा एकदम स्वादिष्ट र अनूठे व्यंजन, यसैले यो जान्न को लागी अझ राम्रो हुनेछ कि वास्तवमा उत्तम प्रयास गर्ने स्थानहरू। मलाई लाग्छ कि त्यहाँ केहि उत्कृष्ट कबाबहरू हुनेछ।
सेप्टेम्बर 29, 2018
यो सब स्वादिष्ट लाग््छ! जब म यो क्षेत्रमा पुग्छु म तपाईंका सिफारिसहरू प्रयोग गर्नेछु।